Ny orinasa loka andraikitra sy ny tsy fivadihany. Miezaka isika mba hahazoana fanavaozana amin'ny vokatra famolavolana sy ny dingana fitantanana. Isika dia manome toky anao avo lamaody, kalitao ambony, ara-potoana delivery best price.-Company news-Tianjin Greatex Iraisam-pirenena ara-Barotra Co.,Ltd
Ny orinasa dia mandray andraikitra ary tsy mivadika. Miezaka izahay ny hahavita fanavaozana eo amin'ny famolavolana vokatra sy ny fitantanana fomba. Manome toky anao izahay lamaody, kalitao ambony, fanaterana fotoana mety sy lafo vidy.
Fotoana: 2019-11-20 Hits: 22
Fanambarana asa fitoriana
Izahay dia manao ny vokatra miaraka amin'ny votoaty fibre toy ny landihazo, rongony, polyester mba hahazoana antoka ny mpanjifantsika hanana fiainana salama sy voalanjalanja ary maharitra.
Tanisao ireo vokatra na serivisy homenay
Izahay dia manao lobaka marobe isan-karazany, fonon-damba, akanjo fandroana, kilalao, ary kojakoja hafa ao an-tokantrano, misy ny sasany aminy manana votoaty manokana toy ny spandex.
Ny vokatra dia misy:
1. Slipcovers seza, loveseat, sofa, recliner chair seza seza ary ny hafa
2. Ny fonon'ny fanaka,pet throw and others
3. Ny akanjo fandroana sy ny hafa
4. kilalao sy ny hafa
Zava-bita sy milestones
All the products had been approved by SGS/BV/ITS for the quality, environment, safety and health series of certification.
Ny tranokalanay dia nandalo ny fanadinana Walmart, Fanadinana fitadiavana, fanaraha-maso ny Costco ary ny fanadihadiana an'i Sedex dia efa.
Ny orinasa dia mandray andraikitra ary tsy mivadika. Miezaka izahay ny hahavita fanavaozana eo amin'ny famolavolana vokatra sy ny fitantanana fomba. Manome ny mpanjifa amam-bika ho an'ny lamaody, kalitao ambony, fanaterana fotoana sy ny vidiny tsara isika.
Lazalazao ny kolontsainan'ny orinasa
Ny fotokevitra misy anay: manaraka ny etika amin'ny fandraharahana, manaraka ny fifanarahana fifanarahana, mifikitra amin'ny fifaninanana ara-drariny ary manaraka ny fiaraha-miasa am-pirahalahiana.
Ny rehetra any Greatex dia manaraka izany fitsipika izany ary miasa am-pahazotoana mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa.
PREV: Izahay dia manao ny vokatra miaraka amin'ny votoaty fibre toy ny landihazo, rongony, polyester mba hahazoana antoka ny mpanjifantsika hanana fiainana salama sy voalanjalanja ary maharitra.
MANARAKA : tsy misy
Binhai Hi-Tech Zone, Tianjin, Sina
Copyright © 2019 Tianjin Greatex International Trading Co, Ltd Zo rehetra voatokana.